कसैले मलाई खतरा छ भने म के गर्नुपर्छ? | USAHello | USAHello
शरणार्थी र आप्रवासी सुरक्षित रहन मदत जानकारी. अमेरिका मा, धेरै शरणार्थी र आप्रवासी समुदाय डराएको र धम्की महसुस गर्दै. यहाँ छन् 10 कसैले तपाईंलाई खतरा छ भने तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरू.
1) प्रहरी कल: 911. फोनमा रहन.
हामीलाई थाहा छ धेरै आप्रवासी र शरणार्थी समुदाय प्रहरी डराउँछन्. तर, यदि तपाईं धम्की भइरहेका छन्, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रहरी कल. कल गर्न पनि डराउँछन् भने, के तपाईं लागि प्रहरी कल गर्न पराई अनुरोध गर्न सक्छ.
2) तपाईं प्रहरी संग फोनमा अझै पनि हुँदा, मित्र वा नातेदार पाठ.
तिनीहरूलाई आफ्नो स्थान भन्नुहोस् र के भइरहेको छ.
3) शान्त रहन प्रयास. बिस्तारै व्यक्ति वा मान्छे देखि सार्न टाढा जसले तपाईंलाई खतरा छन्.
शान्त गर्न व्यक्ति बताउन छैन. यो कुरा झन् खराब बनाउँछ.
4) सम्झनु, सजीव वा हिंसात्मक भइरहेका छन् जो मानिसहरू तर्कसंगत छैन. तिनीहरूलाई कुरा छैन वा तिनीहरूलाई केहि व्याख्या.
तपाईं पराई संग कुराकानी र आफ्नो गलतफहमियहरुलाई बारेमा शिक्षित मदत गर्न सक्छ पटक हुन सक्छ. जब तपाईं महसुस गर्दै डराएको वा धम्की, तपाईं आफ्नो सुरक्षा केन्द्रित गर्नुपर्छ.
5) तपाईं अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ भने, तपाईं वरिपरि ती अंग्रेजी बोल्न.
तपाईं अर्को भाषा बोल्न भने अविवेकी र हिंसात्मक भइरहेका छन् जो मानिसहरू तिनीहरूलाई बारेमा कुरा गर्दै लाग्छ सक्छ.
6) मदतको लागि तपाईं नजिकै अर्को व्यक्ति सोध्न.
एक नव आगन्तुक रूपमा, तपाईं मदत माग्न डर महसुस हुन सक्छ. अनुसन्धान मान्छे समूहमा प्रतिक्रिया छैन देखाउँछ, तर तपाईं मदतको लागि एक व्यक्ति सोध्न भने, तिनीहरूले तपाईंलाई मदत गर्नेछ. तपाईं भयभीत महसुस तिनीहरूलाई बताउन र तिनीहरूलाई नजिकको सार्न. हेर्दै वा हँसिलो तपाईं मा छ जो कसैले खोज्दैन. यदि तपाईं सोध्न प्रतिक्रिया गर्दैन पहिलो व्यक्ति, अर्को व्यक्ति सोध्न.
7) तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ भने, सार्वजनिक ठाउँमा रूपमा चाँडै सकेसम्म जान प्रयास.
के तपाईं सुरक्षित महसुस नगरेसम्म अन्य व्यक्तिसँग एक क्षेत्र मा रहन प्रयास.
8) व्यक्ति नजिक तपाईं आउँदै छ भने र तपाईं भयभीत महसुस, ठूलो स्वरमा कराउने.
तपाईं टाढा रहन तिनीहरूलाई बताउन.
9) तपाईं सुरक्षित छन् पछि, घटनाको रिपोर्ट.
तपाईं के भयो रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै तरिकाहरू छन्:
तपाईं आफ्नो राज्य मा प्रहरी गैर-आकस्मिक लाइन यसलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा राज्य अमेरिका मा, यो संख्या छ 311.
तपाईं व्यापार को एक ठाउँमा थिए भने यो भयो जब (एक स्टोर, जस्तै) व्यापार गर्न यो रिपोर्ट.
तपाईं एक बस वा सबवे वा रेल थिए भने, को ट्रान्जिट कम्पनी यसलाई रिपोर्ट.
10) के भयो बारेमा आफ्नो समुदायमा नेताहरूले बताउन.
तिनीहरूले गर्न स्थानीय प्रहरी र स्थानीय निर्वाचित अधिकारीहरु संग सभाहरू लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र घटना सार्वजनिक सजग आफ्नो समुदाय लक्षित.
यो मिडिया बताउन महत्त्वपूर्ण पनि छ, विद्यालय, र यी घटनाहरू बारेमा समुदायमा संगठन तिनीहरूले के भइरहेको छ र जागरूकता निर्माण गर्न सक्छन् त.
This information is meant to educate newcomers and help them feel prepared when they feel threatened in the United States. यो विचार कानुनी सल्लाह कुनै पनि तरिकामा हुँदैन. तपाईं कानुनी सल्लाह चाहिन्छ भने, सिक्न यहाँ निःशुल्क वा कम लागत वकील फेला.